LG G2 ကို Android 4.4.2 မှာ Root လုပ်ပြီး TWRP ကိုဘယ်လို Install မလဲ Androidsis
Francisco Ruiz | | အန်းဒရွိုက် Recovery ကို, Android Root ပါ, LG, လဲ tutorial
ဒါဟာငါလုပ်ကတည်းကအချို့သောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် LG G2 ကို Android 4.2.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သင်ခန်းစာအပြည့်အစုံ။ ၎င်း မှနေ၍ terminal ကို Root လုပ်နိုင်စေရန်နှင့် system တစ်ခုလုံး၏ backup မိတ္တူများသို့မဟုတ် flash modified Roms များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသောပြုပြင်ထားသော Recovery ကို install လုပ်ရန်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီရှုပ်ထွေးမှုအားလုံးကိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူး LG G2 ကို Android 4.4.2 ပေါ်မှာ root လုပ်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery ကို install လုပ်ပါ။ Android 4.4.2 Kit Kat တွင်ယခုဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပြီး၊ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမရှိရင်တောင်မှ၎င်းသည်လုံးဝမမှန်ကန်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါကလိုအပ်သော APK များထဲမှတစ်ခုကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Android အတွက်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာများမှအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည့်အရာမှစပြီးကျွန်ုပ်သည်ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ မရပါ Towelrot APK သောလွယ်ကူချောမွေ့မည်မဟုတ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် LG G2 ကို root လုပ်ခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာအားလုံးကိုတီထွင်သူများအတွက်ကြွေးတင်နေသည် GeoHotAndroid2ရှိ LG G4.4.2 အတွက် root တီထွင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးသူ့ခေတ်တွင်သူသည်လူသိများလာသည် iPhone ကို Jailbreak လုပ်ပါ ဒါမှမဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် အဆိုပါ Play Station3hack။ ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်လိမ့်မည် APK ၏ဘေးထွက်တွင် TWRPကျေးဇူးတင်ပါတယ် တိမ်တိုက်LG ၏ Android ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မြင်ကွင်းအဟောင်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်သည် Roms သည် Cloudy G3 ကဲ့သို့အံ့မခန်းပါLG G2 အတွက်အကောင်းဆုံး ROM များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ရှိဗီဒီယိုတွင်သင်တွေ့နိုင်သည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်ဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြသော APKs နှစ်ခုကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်နှင့်လွယ်ကူသည်။ ပထမဆုံး GeoHot အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ, LG G2 ကို Root လုပ်မည့် Towelroot, ဒုတိယ APK အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခွအေနေကိုခေါ် AutoREC ပြီးတော့ငါတို့အတွက်ဘာလုပ်မှာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 တွင်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုထည့်ပါအထူးသဖြင့် TWRP ၎င်းမှချက်ပြုတ်ထားသော ROM များကိုကျွန်ုပ်တို့ flash လုပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ system တစ်ခုလုံး၏မိတ္တူပွားကူးယူခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာအတွက် recovery ကိုပင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ငါနှင့်အတူပါသောစာ၌သင်တို့ကိုဒီမှာအခြားအရာတစ်ခုခုကိုပြောပြချင်တယ် Android2ဖြင့် LG G4.4.2 ကို Root လုပ်နည်းနှင့်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းပူးတွဲဗွီဒီယိုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ရရန်အလွန်လွယ်ကူသော်လည်း apk နှစ်ခုလုံး၏ installation လုပ်ငန်းစဉ်၊ တူညီသောလုပ်ဆောင်မှုအစဉ်လိုက်နှင့်လိုအပ်သော download ကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သည်ထက်ပိုရမည်။ superSU နှင့်အတူတူပင် binaries ၏ update ကို။
သံသယမရှိဘဲအောင်မြင်မှုများနှင့် Android Terminal မှာ Root and Recovery ရဖို့ငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ။ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည် GeoHot သို့မဟုတ် Cloudyfa ကဲ့သို့သောအလွန်ထူးကဲသောကျေးဇူးကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2 ကို Android 4.4.2 တွင် Root လုပ်ပြီးပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုမည်သို့ Install ရမည်နည်း
ဟိုဆေး Orlando တွင် Sarmiento ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ Mail ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုပြောလို့စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ် -“ Ah၊ နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့် LG G2, D806 (Argentina), ပြုပြင်ထားသော Recovery ထည့်သွင်းခံရလိမ့်မယ်” လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောမိလို့ပါ။ ငါ root လုပ်ပြီးပြီ သို့သော်၎င်းကို Modified Recovery တွင်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှာရန် (ယနေ့အထိ) လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါဆိုလိုတာကငါ "တစ်ဝက်ရှိတယ်။ " ကျွန်ုပ်၏စက်တွင် Android 4.4.2 Kit Kat အသုံးပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် OTA မှတစ်ဆင့်ရရှိသောတရားဝင် update ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ယခင် Root ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အားတွစ်တာမှတစ်ဆင့်ဖိုင်တွဲပို့ပေးသောထူးခြားသော developer ဖြစ်သော CoperFix မှကျွန်ုပ်အမြစ်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ငါပြောတာက D806 (အာဂျင်တီးနား) နဲ့ D802 (Internac) တို့လားဆိုတာမင်းကိုငါမေးခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့မင်းကမင်းကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကောင်းပြီ၊ ယနေ့စာမူသည်ပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ AuroRec သည်ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ပြီးကတည်းက ... သို့သော်၎င်းသည် D806 နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ကောင်းပြီ၊ ငါမင်းကိုပြောချင်တာ ... ကျွန်ုပ်၏ LG G2 D806 ပြtheနာကိုသင်ဖြေရှင်းရန်စောင့်နေပါတယ်။ အမေရိကန် - ဥရောပညီအစ်ကိုအသင်းအပင်းမှကြီးမားသောဖက်ခြင်း။
José Orlando Sarmiento ကိုပြန်ပြောပါ
ကောင်းသောနေ့! ဒီ rooter က LG G2 MINI အတွက်အလုပ်လုပ်လားဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ကောင်းသောနံနက်ခင်း ANDROIDSIS မှလှပသောလူများ။ ကောင်းပြီ၊ ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏ LG G2, D806 (အာဂျင်တီးနား) တွင်အလုပ်လုပ်နေသည်။ တဖန်ငါဆိုသည်ကား, ငါဒီမှာထပ်မံငါအကြံပေးထားတဲ့, Modified Recovery ကို install လုပ်ဖို့, ငါ့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ပျက်ကွက်ပြီ။ Auto-Rec ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ D806 မော်ဒယ်အတွက်သူမပေါ်လာဘူးဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ (ဘရာဇီးမှာရောင်းတဲ့ D805 အထိ; ပီရူးမှာ D804 ရှိတယ်) ။ ငါ D802 နှင့်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ (ထို့နောက်ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ၎င်းတို့သည်အလွန်ဆင်တူသည်) D805 ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ APK ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ သို့သော်သင်“ ဖွင့်” သောအခါ၊ ကျော်ကြားသော ALLOW အား၊ သင်အား SuperSu သို့မပို့ပါ။ တိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုချက်ကိုငြင်းပယ်လိုက်ပြီးအမှား ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာမည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည် LG G2, Root ကိုဆက်လက်အသုံးပြုသော်လည်း Modified Recovery မပါရှိပါ။ ဤနာမည်ကြီး LG ဖုန်း၏မျိုးကွဲအတွက်သူတို့သည် Recovery ကို Android 4.4.2 တွင်တပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းမရှိသေးပါ။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုငါမနှောင့်ယှက်တော့ဘူး။ မင်းရဲ့လက်ကိုရောက်တဲ့အထိစောင့်နေမှာပါ၊ အဲဒါကိုငါပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘော ထား၍ ငါ့ကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ နောက်တဖန်သင်၏အလုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်၏လေးမြတ်တန်ဖိုးထား ... နှင့်ငါ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်, အားလုံးကို ... !!!
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ movistar မှ lg g2 ရှိပါပြီ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့သောအရာများကိုသိရှိနိုင်ပါကကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ lg g2 ကို movistar မှမထုတ်လုပ်ပါကအမြစ်တွယ်နိုင်သလား။ ? ... မင်းလုပ်ခဲ့တာကိုငါမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်း lg g3 အဖြစ်ပြောင်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်း lg g2 mini ကို root လုပ်တဲ့နည်းကိုလိုက်နာပြီးအမြစ်တွယ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ပြုပြင်ထားတဲ့ recovery ကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ရင်သူက reboot ပေးလိုက်ပြီးပိတ်လိုက်တာနဲ့မဖွင့်ပါဘူး၊ ကျွန်တော့် mobile ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ငါ့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုလှည့်ပြီးအခုမဖွင့်ဘူး !!! ငါ charger ကိုနှင့်ဘာမျှမကချိတ်ဆက် !! ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
ကြည့်ရတာကျွန်ုပ်မှာထပ်တူထပ်မျှပြproblemနာရှိခဲ့သည်။ ငါလုပ်ခဲ့တာက Downloader mode ထဲ၌ကျွန်ုပ်၏ PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး update မမှန်မကန် install လုပ်ထားသလိုမျိုး "Firmware Recovery" ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်းကို LG ၏ PC Tool Software မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူခဲ့ပြီးလူတိုင်းကကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ LG G2 D806 တွင်အမြစ်တွယ်နေရသည်၊ သို့သော် LG G2 ၏ဤမူကွဲနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော Modified Recovery ကိုမည်သည့်နေရာ၌မျှရှာမတွေ့ပါ။ ဒီဟာကသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကျေနပ်လိမ့်မယ်။ မင်္ဂလာပါ။
Newry ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းချင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ချက်ပြုတ်ထားသော ROM ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသော်လည်း 4.4.2 ကိုကျွန်ုပ်သည်တရားဝင် update မှတဆင့် LG ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှကိရိယာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုကျွန်တော်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ သင်၏မိုဘိုင်းသည်တရားဝင်မဟုတ်သော ROM တစ်ခုလည်ပတ်နေပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ငါရုံငါ့အယခင်မှတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းချင်တယ်။ မင်္ဂလာပါ။
ကျွန်ုပ်၏ lg g2 mini D625 တွင်အလုပ်မလုပ်သော towelroot သည်ငါ့ကို root လုပ်ရန်ငါ့ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကကူညီနိုင်မည်
D802_autorec.apk ကိုသုံးပါ (သတိပြုပါ။ D802T မဟုတ်ပါ)
အဲဒီလိုလုပ်ပြီးနောက်ခေါက်ခေါက်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ ယခုမူကား link ကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြုပြင်မည်ကိုပြောပါ
Richie gonzales ဟုသူကပြောသည်
အမြစ်ကပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုသည်မည်သည့်ပြwithoutနာမှမရှိဘဲတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ယခု LG logo မှထွက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသောအခါကျွန်ုပ်ဘာမှမစတင်တော့ပါ၊ အပြာနှင့်အစိမ်းရောင် LEDs များမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ... ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
Richie Gonzales ကိုပြန်ပြောပါ
Richie၊ ပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းမှ cache ကိုသေသေချာချာစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါကရှင်းပစ်သည့်အချက်အလက်ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ သို့သော်သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်သည်။
ဟိုင်းဂျိုး၊ ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့်ငါဒီအသစ်မှာအသစ်တစ်ခုဖြစ်လို့မင်းဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူး၊ ငါ recovery ထဲကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့ကို = (
Worldiego လိုပဲငါဟာဒီဟာမှာ neophyte တစ်ခုပါ။ Recovery က boot မလုပ်ထားဘူး၊ LEDs တွေသာမှိတ်နေတယ်။
worldiego နှင့် Richie ။ Recovery ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ဆဲလ်ကိုပိတ်ထားခြင်း၊ volume + power ကိုဖိထားပြီးလိုဂိုပေါ်လာသည့်အခါပါဝါဖြန့်ပါ။ vol ကိုသိမ်းထားပါ။ သင် reset ပိုစတာတစ်ခုရရှိလိမ့်မည်၊ သင်ကလျစ်လျူရှုပြီးပါဝါခလုတ်ဖြင့် OK ပေးပါလိမ့်မည်။ သင်ပြန်လည်ဖယ်ရှားပေးသည့်နေရာတွင် wipes ကိုရှာသည်။ (သင်သံသယရှိပါက youtube တွင်ဗီဒီယိုများစွာရှိသည်)
သူတို့က recovery ထဲကိုမဝင်နိုင်ဘူးဆိုရင် recovery လုပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုခုမှားယွင်းနေနိုင်တယ်။ အကယ်၍ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် Google G2 ကိုဘယ်လိုဖြုတ်ပစ်ရမလဲဆိုတာကိုရှာပါ။ ပို့စ်အမြောက်အများရှိပါတယ်။ (ဒီမှာရှင်းပြဖို့နည်းနည်းပိုရှည်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း)
မင်္ဂလာပါဂျိုး ငါအကြံပေးသည်အတိုင်းငါပြုပြီ။ TWRP ကို ​​install လုပ်ပြီးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော့် terminal ကိုအမြစ်တွယ်နေပါတယ်။ ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သင်၏မှတ်ချက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်တစ်ခုခုလိုအပ်လျှင်ကျွန်ုပ်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည်၊ သင့်ကိုကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သည်။ လေးစားစွာဖြင့်အာဂျင်တီးနားမှ… !!!
ငါဟိုဆေးဝမ်းသာတယ်။ အခုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဆိုရင် LiquidSmooth rom ကို android lollipop 5.0.1 နဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းတွင်တိုးတက်ရန်အရာအချို့ရှိသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Ok Joe ။ ဒီည (ငါ့ဝါသနာပါတဲ့အချိန်)၊ ငါ ROM ကို download လုပ်ပြီး LG မှာစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ နောက်မှပြောမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ။
ဂျိုးအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းစကားအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်နိုင်ပြီး cache wipie လုပ်သည်။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် system wipiw ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ပြီးနောက်အရာအားလုံးအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းသည်မည်မျှအထိသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ pc ပင်ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းစက်၏ဒရိုင်ဘာကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုဆဲလ်ဖုန်းအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ် pc သည်ကျွန်ုပ်၌ရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းကိုမဖြုတ်နိုင်ပါ။ ၎င်းကို Telcel မှစောင့်ရှောက်မှုစင်တာတစ်ခုသို့ယူပြီးဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးကိုအလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်။ ဒီဗီဒီယိုကိုဘယ်သူ့ကိုမှမပြခဲ့ဘူး၊ သူကသူ့မျက်နှာအကောင့်မှာအကြံပြုချက်တောင်းခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အောင်မြင်သောသူငယ်ချင်းဂျိုး =)
Esteban Ferreyra ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်ဇို၊ ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုမိုဘိုင်းပေါ်မှာနေရာချနိုင်ခဲ့တယ်၊ အမှန်တရားကလပေါင်းများစွာခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်၊ မင်းကိုလက်နှိပ်ပေးနိုင်တယ်၊ ငါ့ဆဲလ်ဖုန်းလည်ပတ်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့်အော်တိုကားမရနိုင်ဘူး။ Recovery ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုအစားထိုး binary files များမှအလုပ်လုပ်နိူင်ပါသလား။
Esteban Ferreyra အားပြန်ပြောပါ
ဂျိုးရိုက်ခြင်းအတွက်အမှားများအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ငါပြန်ဖြေတဲ့အခါငါဘတ်စကားနဲ့ခရီးသွားနေတယ်။ နွေးထွေးစွာဖြင့်!
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Emeng အသစ်ဖြစ်ပြီးအမြစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်သည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝနားမလည်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မလားကြည့်ရအောင်။ g2 international version d802 ရှိတယ်။ ငါ 4g ကိုဖွင့ ်၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်လျှို့ဝှက်မီနူးများကိုကြည့်ရှုလေ့လာပြီး၊ ချစ်ပ်သည်မည်သည့်အရာမျှအလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီများမှအခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုတွင်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်မည်သူကကူညီရမည်ကိုမသိသောသင်ခန်းစာများရှာပါ။
မင်းဘယ်နိုင်ငံကနေပါလဲ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ဥပမာအားဖြင့်ဖုန်းများကိုကန့်သတ်ထားသည် ဤတွင်အာဂျင်တီးနား၌လအနည်းငယ်အကြာမဖြန့်ချီနိုင်ပါ။ မိုဘိုင်းကွန်ယက်များတွင်ဆဲလ်အတွက်အသစ်မွမ်းမံမှုများထွက်မလာလျှင်၎င်းသည် ဦး စားပေးကွန်ယက်၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ အသစ်မွမ်းမံမှုများမရှိပါကမိုဘိုင်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်မပေါ်ပါကအခြား rom ကို flash လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဟိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီအာဂျင်တီးနားမှပါ။ lg ရဲ့ esupport tool နဲ့အတူမွမ်းမံရန်ကြိုးစားပြီးပါပြီ။ နှင့်ဘာမျှမ ,, eñenenuတက်ကြွစွာ 4g option ကိုဝှက်ထားသော menu ကိုဝင်ပြီးနောက်ပေါ်လာပါဘူးပေါ်လာပေမယ့် option ကိုပေါ်လာပေမယ့်ငါ 4g အတွက်သွားလာရန်မတတ်နိုင် soft soft kk4.4.2 နှင့် 80220 ဗားရှင်းအာရှဖြစ်ရမည်။ ငါကြောက်လန့်တာကဆဲလ်ဖုန်းကိုထိပြီးငါ့ကို shit တစ်ခုပို့ဖို့ဖြစ်တယ်။ ငါက ၁၅ ရက်ရှိပြီ။ အဲဒါဟာ့ဒ်ဝဲကိစ္စဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထူးဆန်းတာကလျှို့ဝှက်မီနူးကကျွန်တော့်ကို band 15 ပေးထားတယ်။ ဒါကဒီမှာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ၂၈ ခုပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ကငါ့ကိုမကမ်းပါဘူး
G2 သည်၎င်း၏မော်ဒယ်အားလုံးတွင် 4G ဖြစ်သည်။ Movistar သည်ဇန်နဝါရီလတွင်ဖြန့်ချိသည့် update ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘာမှမပြောပါက ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ သင်မိုးဒေသများရှိနေကြသည်သေချာပါသလား?
စာမျက်နှာပေါ်တွင်အခြေခံ mini သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိသော်လည်းလက်တင်အမေရိကမှ d806 မော်ဒယ်အတွက်လုံခြုံမှုရှိပါက၎င်းသည် Palermo Recoleta ဆိုလျှင်ထိုနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်အား LG သို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပို့ပေးသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းအားလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကို shit တစ်ခုပို့ဖို့ကြောက်တယ်
ကီဗင် Morante Nima ဟုသူကပြောသည်
ဟဲလိုကျွန်တော့်ဆဲလ်ဖုန်း xfavor xq lg g2 mini ကွန်ယက်ဘားမှထွက်လာပေမယ့် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိဘဲသွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။
Kevin Morante Nima အားပြန်လည်ပြောပြပါ
Brother ငါတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ သူတို့သည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ သို့သော်ငါ cel ကိုပြန်လည်စတင်ပြီး twrp သို့တိုက်ရိုက်သွားပြီး၎င်းကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ထိုနေရာတွင်ထပ်မံဝင်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်မှာ Lg G2 D802 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်စနစ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သည်။ ငါသည်သင်တို့၏တုံ့ပြန်မှုတန်ဖိုးထားတယ်
Santana heisenberg ဟုသူကပြောသည်
make it ra1n ခလုပ်ကိုနှိပ်သောအခါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ဤဖုန်းသည်လက်ရှိအားဖြင့်မထောက်ပံ့ပါ
Santana Heisenberg အားပြန်ကြားပါ
HTC Desire Eye ၏ပုံရိပ်အသစ်များက၎င်း၏ ၁၃ megapixel ရှေ့ကင်မရာကိုအတည်ပြုသည်